Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha waaweyn ee keena kaadiheysta furitaanka - Shiinaha
2021 Bacda Biyaha Furitaanka ee Cusub oo Tayo Sare Leh
Boorsadii ugu dambeysay ee 2021 waxay qaadataa teknolojiyadda ugu horumarsan iyo qaababka ugu casrisan. Way ku habboon tahay oo raaxo badan in la isticmaalo. Waxay buuxisaa shuruudaha ilaalinta deegaanka ee caalamiga ah, ma aha mid sumaysan mana laha ur gaar ah, kuma jiraan BPA, waana heer cunto. Kaalay khibradii ugu fiicnayd.
Shayga Maya: BTC071
Magaca badeecada: Kaadiheysta biyaha
Waxyaabaha: TPU / EVA / PEVA
Dhumucda Filimka: 0.3mm
Xirxirida: 1pc / bacda poly + kartoonka
Ciyaaraha Dibedda Boorsada Biyo Cusub Kaambayn Socodka Socodka
Boorso biyo ah oo leh naqshad ku habboon, naqshad hal-badh ah oo kala-goynta tuubbada nuugista, naqshad ballaadhan oo furitaan ah oo ku taal bar-barafka, naqshadda xariiqda miisaanka, iyo naqshadda mashiinka nuugista u janjeera, dhammaantood waxay kuu keenayaan habboonayn aad isticmaal. Iyo sidoo kale waxay leedahay tayo aad u fiican iyo nolol adeeg dheer.
Shayga Maya: BTC081
Bacda Kaadiheysta Fuuq Baxa Ciyaaraha
Bacda biyaha isboortiga banaanka oo tayo sare leh, oo la qaadi karo oo bey'ada u fiican, tani waa saaxiibkaaga ugu fiican jimicsiga, buurta fuulista, baaskiil wadista, iyo kaamamka.
Boorsada biyaha ku habboon ee bey'ada ku habboon ee aan lahayn BPA, naqshadda ballaaran ee furitaanka ayaa ku habboon adiga inaad isticmaasho, ha noqoto fuulitaan, buur fuulid, baaskiil wadid ama isboorti xad-dhaaf ah, bacdan biyaha ah ayaa noqon doonta kaaliyahaaga ugu fiican.
Tayada Sare ee Biyaha Kaydka Jumlada
Boorsada biyaha ee fuuq-baxa waxay ka sameysan tahay sun aan sun lahayn, ur lahayn, hufan, jilicsan iyo jawi ku habboon wax taaj oo kale duray. Waxaa lagu ridi karaa meel kasta oo ka mid ah boorsada jeexitaanka inta lagu jiro fuulitaanka buurta, baaskiil wadista iyo safarka dibadda. Way fududahay inaad ku darto biyo, ku habboon inaad cabto, nuugto oo aad qaadatid markaad wax cabeyso.
Bacda Biyaha Kaabbadeedka La Qaadan Karo
Daboolida ragga, muuqaalka muuqaalka qarsoon, shaqooyinka xoogga leh. Qalab tayo sare leh oo deegaanka u fiican, karti iyo dherer biibiile ayaa loo habeyn karaa. Jirka bacda ayaa ah mid u adkeysanaya dharka oo aan si fudud u dhaawici karin. Kuu ogolaanayaa inaad si dhakhso ah u buuxiso kheyraadka biyaha.
Bacda Biyaha Ciyaaraha Dibadda
Bacda biyaha ee sida gaarka ah loogu talagalay isboortiga. Cadaadis u adkaysta oo xirnaado u adkaysta, xoog leh oo aan qarxin karin. Qalab tayo sare leh oo deegaanka u fiican ayaa soo maray dhowr kormeer iyo shahaadooyin tayo leh. Waad habeyn kartaa qeexitaannada iyo qalabka aad u baahan tahay, oo aad u dhigmi karto qalabka aad jeceshahay. Kuu ogolaanayaa inaad dib u buuxiso qoyaanka intaad fuushan tahay, Waxay kaa caawineysaa inaad ka fiicnaato raadadka socodka.
Kaadiheysta Socodka Socodka Socodka ee Biyo Bixinta leh Tube
Boorso tayo sare leh oo leh furitaan weyn. Adeegso filimka ugu wanaagsan ee bey'ada u fiican iyo qalabka ka yimaada sumcadda caanka ah ee SBS. Iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyada daabacaadda shaashadda, daabacaaddu way cadahay oo ma sahlana in la suuxo. Badeecaddu waxay fiiro gaar ah u leedahay faahfaahinta meel kasta, kaliya inay kuu keento khibrada ugu fiican ee isticmaale.
Kaadiheysta Kaydinta Biyaha Dibadda
Tani waa kiish biyo wanaagsan loo qaabeeyey oo leh fur ballaaran. Buluug cusub ayaa kuu keenaya khibrad muuqaal oo ka duwan tii hore. Dabcan, sidoo kale waa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo cabir kasta ama walxaha aad u baahan tahay, sida TPU, EVA, PEVA. Naqshadda gaarka ah ee daboolka sanka ee sanka ayaa ka fogaan kara ururinta boodhka. Ku habboon dhammaan noocyada waxqabadyada bannaanka. U oggolow inaad naftaada gebi ahaanba banaanka uga soo baxdo oo aad u dhowaato dabeecadda.
Boorsada weyn ee Furitaanka Biyaha Dibadda
Bacda isboortiga dibedda ee leh furitaan ballaaran ayaa ugu habboon nadiifinta iyo buuxinta. Qalabyada tayada sare leh ee bey'ada u fiican waxay u adkeysan karaan heerkulka min 20 digrii illaa iyo 50 darajo togan, waxayna la qabsan karaan jawiyada bannaanka ee kala duwan. Dib kuugu soo buuxi ilaha biyaha xilliyada adag. Noqo kaaliyahaaga dibadda ee ugu fiican.